Seychelles inoba mubairo wepasi rose we "World's Top Ten Gorgeous Coastline Marathon"
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles inoba mubairo we "Wepasi Pese Gumi Gorgeous Coastline Marathon" mubairo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • Sports • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Seychelles inoba mubairo we "Wepasi Pese Gumi Gorgeous Coastline Marathon" mubairo
Zvitsuwa zveSeychelles zvakaonekwa paGorgeousRun yepasi rose marathon marathon IP yekutanga chiitiko muna Chivabvu 23 kuShanghai, ichibvisa mubairo we "Wepamusoro Gumi Gorgeous Coastline Marathon." GorgeousRun ipuratifomu inobatanidza maChinese emumhanyi anomhanya neimwe marathon yekuenda senge Seychelles.
Seychelles Eco-Friendly Marathon chiitiko chegore rose chinozivikanwa pasi rese kuburikidza neChita cheInternational Marathons uye maRace Race (AIMS) chitambi.
Vatori vechikamu kubva kumativi ese epasi vakakwikwidza vachinakidzwa nekuona panoramic kwenzvimbo yakanaka yeSeychelles.
Ichi chiitiko chekuparura chakaratidzawo dzimwe nzvimbo dzinosanganisira Mauritius, Tahiti, Israel, neJamaica.
Chitsuwa ichi paradhiso chakabatana neGorgeousRun kuratidza kunaka kwayo uye kunyanya nzira yayo yeEco-Friendly Marathon kuenda kumaChinese emumhanyi.
Iyo Seychelles Eco-Friendly Marathon, chinova chiitiko chegore rino chinozivikanwa pasi rese kuburikidza neiyo Sangano reInternational Marathons uye Kureba Race (AIMS) chitambi, inobvumidza vatori vechikamu kubva kupasi rese kukwikwidza vachinakidzwa nepanoramic yenzvimbo yakanaka yekuenda munzira yavo.
Kupesana necheseri kwemahombekombe-machena machena uye emerald masango emvura, iyo Seychelles chiitiko chinogamuchira vateereri vepasi rese ve marathon-vanofarira uye nyanzvi zvakafanana. Kubata yayo yegumi nembiri Edition mu12, Seychelles yakanyoresa huwandu hwevatorwa makumi matanhatu nevatatu vekunze vatorwa kubva munyika makumi maviri nesere.
Aivepo pachiitiko cheGorgeousRun aive Muzvare Sun Yingjie, shasha yevakadzi vechiChinese venyika refu-mumhanyi uyo akambotora chikamu muSeychelles Eco-Friendly marathon kuburikidza neiyo GorgeousRun chikuva. Mme Yingjie vakagovana ruzivo rwavo rweparadhiso yakajeka uye nzira yeSeychelles Eco-Friendly Marathon nevateereri, vachikurudzira vamwe kuti vaone kunaka kwekuenda.
Seychelles Tourism Board Director China neJapan, VaJean-Luc Lai-Lam vakataura, "Yange iri nguva yekufungisisa kune wese munhu nekuda kwekutanga kwe COVID-19 uye izvi zvakatipa nguva yekufunga nezve hutano hwedu izvozvi. kupfuura nakare kose. Takatanga kuwedzera maitiro edu ekurovedza muviri uye kutora chikamu mune zvakawanda zvemitambo zviitiko mukutsvaga hutano hwedu. Iyo Seychelles Eco-inoshamwaridzana Marathon inogadzira iyo yakakwana chikuva chevashanyi vedu kuti isu tiite izvo chaizvo tichisangana nezvitsuwa zvedu zvakanaka. Zvakare chiitiko cheGorgeousRun chinotipa nhanho yakanaka yekuti isu tisvike vatengi vedu vatakatarisana navo mumakwikwi emakwikwi. ”